राष्ट्र बैंकले लुघवित्तको ब्याजदरमा लगाएको क्यापले समस्या «
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् लगाएको लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजदरमाथिको क्यापले व्यवसायमा समस्या पर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र माइक्रोफाइनान्स एसोसिएसन अफ नेपाल (म्यान)ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको लुघवित्त क्षेत्रका अवसर र चुनौती विषयक वेबिनार कार्यक्रममा लघुवित्त क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा अर्थविद् केशव आचार्यले लघुवित्तले बढी ब्याज नलिएको भन्ने गलत भ्रम सृजना भएको बताए । त्यो भ्रमलाई लगानीकर्ताले चिर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । लघुवित्त संस्थाहरुलाई बैंक, सहकारीलगायतका संस्थाहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो अवस्था आएको उनले बताए । त्यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि लघुवित्त क्षेत्रमा विकृति ल्याएको उनको तर्क थियो ।
लघुवित्त क्षेत्र र अहिलेको अवस्थाबारेमा लघुवित्त विश्लेषक डा. भरत थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैल घुवित्त क्षेत्रले महिलाको आर्थिक उन्नति र सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । त्यसका साथै धनी र गरिबको खाडललाई कम गर्न समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनले बताए । त्यस्तै मानव अधिकारको क्षेत्रमा जनचेतना बढाउने, सामाजिक विचार–विमर्श लगायतमा लघुवित्तको महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको डा. थापाको भनाइ थियो । लघुवित्त क्षेत्रले बालबालिकाहरुको शिक्षा, स्वाथ्यमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको डा. थापाले बताए ।
यस क्षेत्रले ठूलो क्षेत्रलाई रोजगारी दिएको समेत उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रको क्यापिटल फण्डका साथै सदस्य पनि बढेको छ । पछिल्लो समय डिजिटल कारोबारलाई बढावा दिइएको भए पनि अनलाइन पेमेन्टमा ग्राहकहरु कन्फ्युजन भएको थापा बताउँछन् । कोरोनाको महामारीसँगै लघुवित्त क्षेत्रको व्यवसाय ओरालो लाग्न थालेको भन्दै ग्राहकलाई आकर्षित गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको थापाको विश्लेषण छ ।
“मर्जरका कारण कर्मचारी व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण भएको छ । ऋण तिर्ने क्षमता हँुदाहँुदै पनि नतिर्नेको संख्या थुप्रै छ,” उनले भने । डा. थापाका अनुसार यस क्षेत्रले स्वरोजगारका लागि दिगो रुपमा टिकाइराख्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको आँखामा खाली नाफामात्रै भएको र नाफा धेरै कमाउउँछन् भन्ने भ्रम भएको विश्लेषक थापाले बताए । जसका कारण लघुवित्त क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा कर्जाको माग बढिरहेको उनले बताए । यसले लघुवित्त क्षेत्रको व्यवसाय वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने उनको दाबी थियो ।
कार्यक्रममा लघुवित्त बैंकर्सं संघका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले लघुवित्त संस्थाहरुलाई धेरै प्रकारका आरोप लगाइने गरेकोमा गुनासो गरे । लघुवित्त संस्थाहरुलाई ब्याजदर बढी लिएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको भन्दै यस क्षेत्रको लागत नै बढी भएको अध्यक्ष लम्सालको भनाइ थियो । विगतका वर्षहरुमा १३÷१४ प्रतिशतसम्म ऋण ल्याउने र १८ प्रतिशतमा लगानी गर्दा महँगो भन्ने गरेको भन्दै उनले गुनासो गरे । घरघरमा गएर सेवा दिँदा महँगो हुनु स्वभाविक भएको अध्यक्ष लम्सालको भनाइ छ । अध्यक्ष लम्सालका अनुसार राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले व्यवसाय बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा लगाएको १५ प्रतिशत क्यापले समस्या निम्त्याएको बताएका थिए ।